Muusi Biixi oo Amray in Cadaaladda la horkeeno dad kufsi & dil geystay - Awdinle Online
Muusi Biixi oo Amray in Cadaaladda la horkeeno dad kufsi & dil geystay
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo Maanta khudbad ka jeedinayay munaasabad ay Arday Jaamacadeed ku qalin jebinayeen oo lagu qabtay Magaalada Burco ayaa ka hadlay kufsi & dil Magaaladaas loogu geystay 11-kii Bishaan Hooyo saddex Carruur ah laheyd oo lagu Magacaabi jiray Ugbaad Cali Cabdullaahi.
Madaxweyne Muuse Biixi ayaa marka hore Shacabka Magaalada Burco, ehellada Ugbaad Cali Cabdullaahi & ardayada Jaamacadda uga tacsiyadeeyay kufsiga iyo dilka loo geystay , waxaana uu sheegay in uu aad uga xun yahay, maadaama ay aheyd ardayad Maanta kamid noqon laheyd kuwa qalin jebinaya.
Hay’adaha Garsoorka Soomaaliland ayuu faray Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in hawsha sida ugu dhaqsaha badan loo dadajiyo , waxaana uu balan qaaday in uu horey ka fuliyo marka uu ku cadaado dadka loo heysto falkaas.
Dadka ku nool Magaalada Burco ee degaannada Soomaaliland ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ay u hadal haayeen falka kufsiga iyo dilka ah ee loo geystay Ugbaad Cali Cabdullaahi oo aheyd Hooyo saddex Carruur ah leh.
Previous articleDhimasho ka dhalatay fatahaad uu geysay Wabiga Shabeelle
Next articleAskari ka tirsan ilaalada Taliyaha Booliska oo dil geystay